Fikradda naqshadda 24 Shimbiraha ugu fiican ee loogu talagalay raga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta shimbiraha ee 24 Shimbiraha ugu fiican ee ragga iyo dumarka
Weligaa ma aragtay tattoos shimbir quruxsan? Dabcan waxaad haysataa. Tilmaamyadani waa dumar marka loo isticmaalo gabdhaha iyo qurux badan inay aragto.
Tattoo shimbir macnaheedu waa
Shimbiraha waxaa loo yaqaanaa xayawaan lacag la'aan ah taas oo ah sababta ay dad badani u galayaan. Waxay la xiriiri kartaa waxyaabo badan oo nolosha ah, taasina waa sababta aad u heli karto rag iyo dumar isticmaalaya. Qaar ka mid ah dadku waxay isku xirxiraan tafaariiqda, xorriyadda, nabadda, jacaylka, aqoonta, caqliga caqliga, xarrago, quruxda, qoyska, hooyada, hanuuninta ruuxiga ah iyo waxyaabo kale oo badan.
Sawirrada shimbiraha waxaa loogu talagalay inay u eegaan qabow iyo aan caadi ahayn qaabeynta iyo qaabka. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay dadku ugu doorteen naqshad kale #tattoo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah shimbir shimbir oo leh macno kala duwan. Adiga ayaa ah inaad go'aamiso nooca shimbirta ah ee aad u baahan tahay si aad ugu keydiso jirkaaga. Shimbiraha waxay ku yimaadaan qiyaaso iyo qaabab oo mid walbana wuxuu leeyahay wax gaar ah oo iyaga ku saabsan. Dadka jecel inay tagaan xorriyadda ama dareenka lahaanshaha nolosha waxay u tegi karaan naqshadeynta tattoo gaar ah. Tartoo shimbiraha ayaa lagu qori karaa qayb kasta oo jirka ah iyada oo aan loo malaynin in lumay macnaha lumay iyo sidoo kale waxay sheegi kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan qof.
Shimbiraha ayaa loo yaqaan inay noqdaan kuwo xiiso leh oo qurux badan. Tartu shimbir kasta waxay leedahay macnaha rasmiga ah dadka intooda badan waxay isticmaalaan iyaga oo ah dhexdhexaadiyayaal u dhexeeya nin iyo ilaahyo. il image
Waxaan kuu sheegi karnaa macnaha qaar ka mid ah shimbiraha shimbiraha ka hor intaadan ka fekerin isticmaalkooda. Tattoo Sparrow ayaa loo isticmaali karaa si loo muujiyo xaalad aan macquul ahayn iyo hoos u dhac. Baybalka Quduuska ah wuxuu u adeegsaday inuu u noqdo mid cidlo iyo kali ah. il image
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay ku sugan tahay Japan, waxay u taagan tahay daacadnimo inta ay ku jirto khuraafaadka Giriigga, waxa ay la xidhiidhaa bacriminta iyo dhadhanka arooska. il image
Haddii aad ka fekereyso helitaanka tattoo liqidda, markaa waxaad ka hadlaysaa bacriminta iyo nolosha cusbooneysiinta. Kuwa ku nool Afrika, dabaqadu waxay u muuqataa mid nadiif ah halka kuwa Shiinaha ay u arkaan inay liqayaan farxad guur. il image
Tartanka Shimbiraha ee Weyn
Mid ka mid ah tattoos shimbir caan ah waa shaashadda Dove ee ka dhigan daahir, naxariis, nabadda iyo nafta dembi la'aan. Markaad aragto laba qoollo oo wada jir ah, waxaad ka hadli kartaa ku kalsoonaanta iyo jacaylka guurka. Maxaa ku saabsan tattooska Swan? il image
Swam waxay u taagan tahay gudbinta iyo kalsoonida Giriigga, waxay u taagan tahay goddiis Venus. Dadka u socdaalaya tattooska stork, waxay doonayaan inay matalaan dhalashada iyo guga. il image
Calaamaduhu waxay matalaan bacriminta iyo gu'ga waxayna qaadataa qadarin maxaa yeelay xatooyo ayaa loo yaqaan jaaniska. Si kastaba ha noqotee, xatooyo ayaa loo tixgeliyaa inay la xiriiraan roobab, wax-sheegasho, jacayl iyo karma Hinduism. il image
Dalka Shiinaha, Crane waxaa loo sheegi karaa inuu yahay mid wanaagsan. Qaar waxay u yeedheen kuwa ku faraxsan jacaylka iyo jacaylka iyo ilaahyada ilaahyada. il image
Si aad u hesho # fiican oo ah tattoo shimbir ah waa waxa aad u baahan tahay inaad marka hore tixgeliso. Waa inaad hubisaa in aad tixgelisay sawir-qaadaha oo kuu qabanaya sawirkaaga. il image
Ka dib markaad tan sameyso waxaad ka hadli kartaa tattooist. Waxaa jira bogag internet oo aad ka heli karto tattooist wanaagsan ee shaatiinka shimbirahaaga. Ugu dambeyntii, waxaad u baahan tahay inaad ka soo qaadato qeybta jirka ee aad u aragto inaad ku qumman tahay tattoo shimbirtaada. Maxaad ka fekereysaa shimbirahan? il image
Shimbiraha waa xayawaan aad u qurux badan oo qiiro u leh qalbigeenna markaan aragno. Waxaa laga yaabaa inaanan fursad u helin inaan aragno shimbirahan shimbiraha ah ee jirkeena laakiin waxaan leenahay mudnaanta ah in ay iyaga naga dhigteen. Tattoo shimbiruhu wuxuu noqday shimbir shimbir shaashad ah oo qofkastaa isticmaali karo. il image
Waxaa jira noocyo kala duwan oo shimbiro ah; shimbiraha gurguurta iyo kuwa duurjoogta ah ee dhammaan noocyada iyo cabbirka. Shimbir kasta waxay leedahay muhiimadeeda taasoo ah sababta aan uga taxaddareyno nooca shimbirta shimbirta ah ee aan isticmaaleyno. il image
Tusaale ahaan, qaata ama caanku waxa ay la xidhiidhaan sixirka madow iyo sixirka, halka qoollada caddaanka ah loo yaqaanno calaamad u ah nabadda iyo nadiifnimada. il image
Waa muhiim in aad fahamto in qaabka shimbirta shimbirta ay noqotey mid muhiim ah. Waa inaad naga qaadataa wakhti aan ku raadinno buugta internetka ee shimbiraha ka hor inta aanad dooran doorashadaada. il image
Marka ugu horeysa ee aad sameyso waa inaad hesho tattooist oo kuu sheegi doona waxa ku jira munaasabadda. Waa inaad ka fekertaa sifooyinka aad shimbiraha aad dooratid. il image
Markaad aragto shaati sidan oo kale ah, ma caawin kartid, laakiin adoo eegaya. Haddii aad tahay gabadh waxayna raadineysaa waxa qalooc ah si aad u istaagto oo kali ah dadweynaha, waxaad u tegi kartaa tattoo shaashadda gacanta ku leh ubaxyo isku xiran. il image
Fashionistas waxay bartay sida loo qaato habka heerka xiga marka ay timaado shimbir shimbir. Waxaad samayn kartaa faraqa markaad rabto inaad ka guurto naqshadaha ubaxa marka aad haysato shimbir shimbir ah oo dhaadheer sida tan. il image
Markaad aragto tattoo this, waad jeclaan doontaa iyaga. Qurxinta tattooanku waxay ka dhigeysaa mid aad u wanaagsan. Ha welwelin xitaa haddii aad tahay nin maxaa yeelay jirkaaga ayaa aqbali doona naqshad noocan ah. il image
Qofna ma arko nooca nooca tattoo ah mana jeclaan doono. Dabeecadda quruxda badan ee tattoo waa mid cajiib ah kuwa kuwa soo jiidana waa dadka indhaha ku ah wax wanaagsan. il image
Waxaad la kulmi kartaa tattooistahaaga si uu kaaga caawiyo inaad samayso tattoo weyn ee jirkaada. il image
Markaad erayada iyo shimbiraha isku dhafanaysid sida tattoo, waxaad heli doontaa sheeko weyn sida tan. Sidee u jeceshahay tattoo this? il image
Halkan riix halkan si aad u hesho Sawirada Shimbiraha Tattoo
Hada, waan ahay Soni iyo milkiilaha boggaan farshaxan sawirada. Waxaan jeclaan lahaa hinna, caarada, caleemaha, caleemaha, guntiga, dharka, guntiga, laabta, lammaanaha, faraha, ubaxa, dhakada, boodhka, maroodiga, boodada, boodhka, cagaha, libaax, yeyga, dhabarka, shimbiraha iyo nooca wadnaha ee tattoo . Wax kasta oo aan jecelahay fikradda cusub ee tattoo ee ku jira boggaga internetka kala duwan. Waxan sheeganeynin xuquuqda sawirada, adigoo kaliya wadaagaya. Waxaad i soo raaci kartaa Google Plus iyo Twitter
Badbaadiso magacayga, emailka, iyo bogga shabakada internetka ee waqtiga xiga ee aan faallo ka bixinayo.
Fadlan gali jawaabta tirooyinka:
laba iyo toban - shan =
Tattoo Feathergadaal u laabosawirada gabdhahasawirada malaa'igtaTartoo ubax badantattoos qosol lehtattoo maroodigatattoo indhahashaatiinka shiidanTattoos Wadnahatattoos gacantaqadhaadhcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoossawir gacmeeddharbaaxotattoo tilmaanDhaqdhaqaaqalammaanahatattoos iskutallaabtatattoos ubaxtattoos moondabbaaldegga dabbaaldeggaTilmaamta jaalaha ahtattoos saaxiib saxa ahtattoos-da riyadiisafikradaha tattoosawirrada raggagaraacista gacmahatattoo dheemanshimbir shimbirtattoos qorraxdaku dhaji tattooslaabto laabtatattoos sleevetattoo dragontattoos cagtalibto libaaxnaqshadeynta mehnditattoos taajkiitattoo yar yarwaxaa la dhajiyay tattoosjimicsiga bisadahatattoos qoortatattoos eaglearrow TattooTattoo infinitytattoos qabaa'ilkahenna tattootattoo biyo ah